Ciidanka Qaranka Somaliland Oo La Wareegay Fadhiisimadii Kooxda SSC Ee Taageerada Ka Haysta Maamulka Budhacd-badeeda Ee Garoowe Iyo Tirada Maxaabiista Laga Qabtay – Araweelo News Network (Archive)
Ciidanka Qaranka Somaliland Oo La Wareegay Fadhiisimadii Kooxda SSC Ee Taageerada Ka Haysta Maamulka Budhacd-badeeda Ee Garoowe Iyo Tirada Maxaabiista Laga Qabtay
Burco(ANN) Ciidanka qaranka Somaliland ee ku sugan jiida hore ee duleedka Buuhoodle ayaa gebi ahaanba la wareegay subaxnimadii hore ee saaka saddex goobood oo fadhiisin u ahaa Malayshiyada Nabad diidka SSC ee taageerada ka haysta maamulka budhacad-badeeda ee xaruntiisu tahay Garoowe.
Talaabada ciidanku kula wareegeen goobahaa oo fadhiisin u ahaa Malayshiyadaa ayaa ka danbaysay. Kadib markii ay cutubyo ka tirsan ciidanka Qaranka Somaliland ku ruqaansadeen saaka subaxnimadii hore halkaa, iyagoo gacanta ku dhigay 7 maxbuus oo ka mid ah malayshiyadaa iyo hal gaadhi oo kuwa gaashaaman ah, isla markaana kala wareegay fadhiisimadii dhufayska u ahaa kooxda oo kala ah Maygaagle, Sool joogto iyo Hagoogane.
Ma jiraan warar rasmi ah oo sheegaya halka ay ku danbeeyeen malayshiyadii goobahaa deganayd, balse warar dhinaca Buuhoodle ay ka heshay shebekada wararka ee Araweelonews ayaa sheegaya inay firxadkii kooxdaasi galeen gudaha magaalada Buuhoodle.
Wararka ka imanaya aaga hore ee fadhiisimada ciidanka qaranka ayaa sheegaya in mid ka mid ah ciidanka qaranka uu soo gaadhay dhaawac fudud, iyadoo aanay jirin cid ku dhimatay.
Dhinaca malayshiyada ayaanay jirin warar faafhaahsan oo sheegaya inta uu leegayahay khasaaraha soo gaadhay, balse waxa jira warar sheegaya inay ilaa 4 ka mid ah malayshiyadu dhinteen, dhawaacuna tobaneeyo yahay. Talaabada ay qaadeen ciidanka qaranka Somaliland ayaa cabsi ku abuurtay dadka magaalada Buuhoodle oo malayshiyadu ka dhigatay gabood ay ku gabadaan.
Malayshiyada nabaddiidka ah ee SSC ayaa taageero siyaasadeed iyo hub ka helay dhowaan kooxda dawladda ku meel gaadhka ee Somalia iyo maamulka Budhcadbadeeda ee xaruntiisu tahay Garoowe. Sidoo kale waxay hub iyo saanad milateri ka heleen dawladda Eretria ee sida weyn uga qayb qaadata qalalaasaha iyo mushkiladaha dagaalada ka socday Somalia labaatankii sannadood ee u danbeeyay.
wixii kasoo kordha xaalada kala soco shebekada wararka ee Araweelonews.com
Published February 20, 2011 By info
Ciidanka Amaanka Soomaliland Oo Gacanta Ku Dhigay Koox Lala Xidhiidhiyay Argagixisada Kadib Hawlgal Ay Ka Fuliyeen Caawa Hargeysa
“Darbac Tignikadii Uu La Baxsaday Iyo Labadisii Inanba Waa La Qabtay, Dagaalkuna Wuu Socdaa.” Afhayeen U Hadlay Wasaaradda Gaashaandhiga Somaliland